खुल्यो ‘ईडीभी २०२३’ : हे’र्नुहोस् कसरी भर्ने फारम ? – Sadhaiko Khabar
खुल्यो ‘ईडीभी २०२३’ : हे’र्नुहोस् कसरी भर्ने फारम ?
प्रकाशित मिति: बिहिबार, आश्विन २१, २०७८ समय: ९:४४:३९
काठमाडौँ / अमेरिकाले सन् २०२३ का लागि आजदेखि ईडिभी चिट्ठा खुला गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाली समयअनुसार बुधबार बेलुका ९:४५ देखि डिभी चिट्ठा खुला गरेको हो ।
डिभी २०२३ का विजेताहरूले सन् २०२३ को सेप्टेम्बर ३० सम्म भिसा प्राप्त गर्नसक्ने छन् भने नतिजा सन् २०२२ को मे महिनामा आउनेछ । नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले डिभीबारे फेसबुकमा पनि जानकारी दिएको छ ।
डीभी चिठ्ठा आ’वेदन भरेको निश्चित समयपछि अमेरिकाको विदेशमन्त्रालयले चिठ्ठाको नतिजा सार्वजनिक गर्दछ । डीभी भर्ने बेला दिइएको कन्फरमेसन कोडको माध्यमबाट डीभी चिठ्ठा परे/नपरेको निश्चित हुन्छ । यसकारण कन्फरमेसन कोड बि’र्सिनु हुँदैन ।
यदी डीभी चिठ्ठा परेको भए आप्रवासन भिसाको औपचारिक आवेदन दिनुपर्ने प्रा’बधान छ । यससँगै आफ्नो शैक्षिक योग्यता र अन्य आवश्यक दस्ता’वेजहरु पे’श गर्नुपर्छ । दस्तावेज नेपाली वा अरु कुनै भाषामा भए त्यसको अंग्रेजी प्रति पनि पे’श गर्नुपर्छ ।
त्यसपछि अमेरिकी अध्या’गमन निकायले आवेदकको पृष्ठभूमि अध्ययन गर्छन् । आवे’दकको आ’पराधिक रे’कर्ड, विवरण सही भए/नभएको जाँच, मे’डिकल जाँ’च लगायतको अध्ययन गरिसकेपछि अन्तरवार्ताको प्रक्रिया शुरु हुन्छ ।
तर, आवेदकको सबै विवरण सही भएपनि अन्तरवार्ताका लागि छनोट न’हुन सक्छन् । डीभी परेका सबैलाई भने अमेरिकाले भिसा दिँदैन । अमेरिकाले डीभी परेका करिव ४० प्रतिशतलाई मात्रै भिसा दिने गरेको बताइन्छ ।
छनौट भई अन्तरवार्ता सफल भएमा आ’वेदकको अमेरिका यात्राका लागि बाटो खुला हुन्छ । त्यसपछि तपाईलाई आ’प्रवासन भिसा दिइन्छ । यद्यपि अन्तरवार्तामा सफल भएका सबैले भिसा पाउँछन् भन्ने पनि हुन्न । तर, भिसा पाएपछि भने अमेरिका यात्राको बाटो खुला हुन्छ ।